Furidzira Kuumba mhinduro - Delta Injiniya - Kuvandudza kugona kwako!
Mhinduro dzeBlow Molding: michina yekugadzira uye kurongedza kwemabhodhoro epurasitiki nemidziyo: palletizers, leak testers, ...
Kugadzirisa Ridzai richigadzirisa
Yedu yekupakira mhinduro yeanorova kuumbwa indasitiri inosanganisira akasiyana siyana mabhegi, tireyi packers, palletizers & depilletizers, kesi mapaketi, anodzikira tunnels, tireyi matura, tumble rongedza mhinduro…
Batsirwa neruzivo rwedu rwekutonga kwemhando yemabhodhoro ako epurasitiki kana midziyo: kuyedzwa kwekudonha, kuongorora uremu, kudonhedza zvekushandisa ...
Bhodhoro rinodhirowa (bhanhire rakapetana, cheni, parutivi inobata), kubata pallet, kukwidziridzira, nzira yekushandura ...
Shanyira maroadshows edu muna 2022!
Iwe unoda rumwe ruzivo here pamaroadshows edu kana iwe unoda kunyoresa? Dzvanya pano kutitumira email!
Chigadzirwa & sevhisi yepamusoro
Webhusaiti & zvakavanzika mutemo
Bhegi rinodhura Calculator
KuDelta Injiniya, isu tine anopfuura makore makumi maviri nemashanu ezviitiko mu mhinduro dzekuvhuvhuta kuumbwa.
Kubva kuvambwa kwedu muna 1992, tanga tichitarisa pane iyo zvinodiwa nevatengi vedu. Kunyanya, tanga tichigadzira a yakazara yakazara mhinduro kumatambudziko anowanikwa nemakambani ari muchikamu.
Kuenzanisira, yedu chigadzirwa mutsara unosanganisira palletizers uye depalletizers, tireyi mapaketi, emhando yekudzora michina senge leak testers kana huremu checkers, mabhegi, kudzikira tunnels, kesi packers, tumble pack mhinduro, silos, matura matura, kutora-kunze masisitimu, ekucheka michina, anotakura , kutonhora uye buffer matafura, kudzikisa matafura, vanotora mabhodhoro, lane switch, maeleti eebhodhoro, matara anotonga, bata vanoshanda, plasma machira…
Muchidimbu, akasiyana michina uye mhinduro dzeiyo kugadzirwa uye kuputirwa kwemabhodhoro epurasitiki nemidziyo!
Uyezve, chinangwa chedu ndechekuti:
Vandudza kugona kwako!
Kuti izvi zviitike, isu tinogadzira uye tinogadzira mhinduro dzinogonesa vatengi vedu 'maitiro ekugadzira, nekudzora basa remaoko, kurongedza zvinhu uye mutengo wekufambisa.
Kutenda neiyi nzira, Delta Injiniya yave mumwe wevanotungamira vanopa ma automation mhinduro nokuti furidza Kuumbwa indasitiri.
Kubudirira kwedu kwakavakirwa pane dzakasiyana siyana dzakanyatsofungidzirwa-kunze kuridza kuumba mhinduro.
Uye zvakare, inogona zvakare kutsanangurwa nevashandi vedu vane hunyanzvi, kuvimbika kwavo uye nekudaro kuunganidzwa kwe ruzivo, iyo inobatsira zvikuru vatengi vedu.
Chimwe chinhu ndeche utsanzi. Zvitsva zvedu zvinoratidza mwero wakakwirira watinozvigadzirira pachedu semusika uye mutungamiri wehunyanzvi mukuvhuvhuta kuumba yakadzika indasitiri.
Uye, chekupedzisira asi chisiri chidiki, isu tinotenda kukura kwedu kune inogara drive yekuvandudza yedu sevhisi kunyangwe: isu tinovavarira kuisa kwakanyanya uye mushure mekutengesa rutsigiro.
Nekuda kweizvozvo, isu takasarudzika kusangana nezvinodiwa nevatengi vedu pasi rese.